Wepamusoro 500: mushure megore Fugaku ichiri pamusoro pechinyorwa | Linux Vakapindwa muropa
Mumwedzi wapfuura waJune Wepamusoro mazana mashanu ekuvandudza akaunzwa (Iyo inovandudzwa munaJune naNovember wegore rega rega) uye inoteedzera kushanduka kwekuita uye dhizaini yemasimba ane simba kwazvo munyika, uyu uri mushumo watinogona kuziva kumhanyisa kwavanoenderana nePamusoro Performance. Linpack bhenji. (HPL), iyo inoyera kugona kwesystem kugadzirisa dense system yezvakayenzana equations.
Uye mushanduro iyi nyowani yakapihwa, mune gumi gumi munzvimbo yekupedzisira, vashanu vari muUnited States, vatatu muChina, mumwe kuGerman uye mumwe kuItaly.
Mune ino nyowani nyowani ye2021 iyo Fugaku anoenderera munzvimbo yekutanga kubvira gore rapfuura uye ikozvino yakarova 442 petaflops muchiyero cheHPL, iine 7.630.848 cores. Mhedzisiro iyi yakafanana neiya yakawanikwa munaNovember 2020, asi yakakwira kupfuura iyo 415,53 petaflops yakawanikwa gore rapfuura payakanyora runyorwa.
Komputa huru Iyo yakavakirwa pane Fujitsu's tsika Arm A64FX processor uye haishandisi iyo GPU, Iyo yakaiswa muRIKEN Center yeComputational Sayenzi (R-CCS) muKobe, Japan, muchina uyu wakakosha mukurwisa covid-19.
Panzvimbo yechipiri tinogona kuwana ne148.8 petaflop kuenda kuSummit paOak Ridge National Laboratory, USA, iyo yava kuda kuita makore matatu uye inoshandisa 27.000 Nvidia Tesla V100 GPU dzakapetwa ne9.000 IBM Power9 CPUs.
Panzvimbo yechitatu ndiyo supercomputer «Sierra», iyo yakafanana mukugadzirwa kweSummit uye inoshandiswa naLawrence Livermore National Laboratory (United States).
Panzvimbo yechina ine 94,6 petaflop, pane iyo Sunway TaihuLight (China).
Nepo nzvimbo yechishanu inogarwa naPermmutter, yakaiswa paBerkeley Lab's National Energy Research Scientific Computing Center. Iyo HPE Cray EX system inofambiswa ne AMD Mil processor uye 100GB Nvidia A40 GPUs, yakabatana nehunyanzvi hweHPE's Slingshot. Zvinoenderana nebhenji reHPL, iyo sisitimu yakaendesa 65,69 Linpack rMax petaflops pamusoro pechinogona kukwirira (rPeak) ye93,75 petaflops, inoenderana neLinpack inoshanda ye70%. Perlmutter ndiyo hombe Nvidia A100 GPU system uye hombe HPE Cray EX (yeruzhinji) system yakatumirwa kusvika parizvino, zvichibva pakuvakwa kwaimbozivikanwa se "Shasta"
Panzvimbo yechitanhatu ndi «Selene» Nvidia's system ine 63,46 petaflops uye mune iyo Nvidia's SuperPod A100 DGX modular yekushongedza inoitwa ne AMD Eypc Roma processor uye Nvidia's 100GB A80 GPUs.
Panzvimbo yechinomwe Tianhe-2A, Yakavakwa muChina, iyo yakarasikirwa nenzvimbo imwe mune ino chinzvimbo uye yakaendesa 61,4 Linpack petaflops. Iyo yakagadzirirwa neIntel Xeon machipisi uye tsika Matrox-2000 zvinowedzera. Iyo yakaiswa muNational Supercomputing Center muGuangzhou.
Panzvimbo yechisere ndiyo «JUWELS Module», Komputa huru yeEuropean ine simba kwazvo, iyo Atos BullSequana supercomputer yakashongedzerwa neEpyc CPUs uye A100 GPUs. Inowanikwa muGerman, inokwanisa 44,1 petaflops.
Mukati memashoko makuru weiyi yepamusoro gumi, tinogona kuwana izvo Dell anoramba ari nhamba yekutanga mupi wezvedzidzo uye nhamba yekutanga yekutengesa nekutengesa neHPC-5, inoshandiswa neItaly fossil mafuta hofori Eni naFrontera kubva kuTexas Advanced Computing Center kuYunivhesiti yeTexas munzvimbo dzechipfumbamwe nechegumi, zvichiteerana.
kunze kwaizvozvo China ichiri kutungamira maererano nenhamba yesystem.
Vakuru mazana mashanu vakacherekedza kuti hapasati paine humbowo hwakajeka hwekuti nei kusashanda zvakanaka kweChina kuri kuitika, kunyange hazvo izvi zvingave zvine chekuita nekuwedzera masanctions kumakambani ekuChina anodzvinyirira uye kusagadzikana kwezvematongerwo enyika pakati peUnited States neChina. Izvi zvinhu zvinoita kuti zviomere makambani uye marabhorabhu ekutsvagisa kuti awane zvishandiso zvepamhepo uye kashoma kutora chikamu muhurongwa hwekuzvidira hunogona kuvaisa mumutsara webhizinesi revatariri.
AMD yakaita zvakanaka, nekuti neichi chinyorwa chitsva cheTop 500 tinogona kuona "kuwedzera kwakamisikidzwa" mukushandisa kwayo. Izvi zvinoenderana nekufambira mberi kwe AMD kwesevha uye supercomputing nzvimbo, iri kutora zvikamu zveIntel.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Wepamusoro 500: mushure megore rimwe Fugaku ichiri pamusoro pechinyorwa
CBL-Mariner, kugoverwa kweLinux kuseri kweWSL, Azure uye zvimwe zvigadzirwa zveMicrosoft